कान्तिपुरले किन जोगायो बैँकहरुलाई "फिनसेन फाइल्समा" ?
आर्थिक कान्तिपुरले किन जोगायो बैँकहरुलाई "फिनसेन फाइल्समा" ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: अमेरिकाको बजफिड न्युजले एक वर्षभन्दा अगाडि ठूलो संख्यामा गोप्य सरकारी कागजातहरुमा पहुँच पायो। खासमा सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचन र अन्य विषयहरुमा छानबिन गरिरहेका निकायहरुले जम्मा पारेको यो कागजातमा २१ सयभन्दा बढी शंकास्पद गतिविधिहरुको रिपोर्ट रहेछ। यस्ता गतिविधिहरुको रिपोर्ट बैँकहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुले अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क जसलाई छोटकरीमा फिनसेन पनि भनिन्छ, लाई बुझाएको थियो। खासमा यो आफैमा अपराधको प्रमाण होइन, यो त अनुसन्धान र इन्टेलिजेन्स ग्यादरिङका लागि सहयोग हो।
बजफिड आफैले ठूलो संख्याको यो कागजातलाई खोतल्न नसकेपछि उसले खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिआइजे र ८० देशका १०० भन्दा बढी सञ्चार संस्थाहरुसित सहकार्य गर्‍यो। आइसिआइजेमार्फत् नेपालको खोज पत्रकारिता केन्द्र (सिआइजे) पनि यसमा जोडियो।
कृष्ण आचार्य, रामु सापकोटा र शिव गाउँलेले यसबारे रिपोर्ट तयार पारे, जुन विभिन्न अनलाइनहरुसहित कान्तिपुरमा समेत छापियो। तर सिआइजेको वेबसाइट, अरु अनलाइनहरुमा आएको समाचार र कान्तिपुरमा आएको समाचार फरक छ। कान्तिपुरले नेपाली बैँकहरु उल्लेख भएको जति अंश सम्पादन गरेर उडाइदिएको छ। यसले बैँक जोगाउने कान्तिपुरको बदनियत देखिएको छ।
कान्तिपुरले बैँकहरुको नाम कसरी हटायो? हेर्नुस्
पहिलो अनुच्छेद : बैँक संलग्न होइन, कारोबार मात्र गरेको !
यो हो सिआइजेको रिपोर्टको पहिलो अनुच्छेद
यो हो कान्तिपुरको रिपोर्टको पहिलो अनुच्छेद
गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा केही नेपाली कम्पनीहरु संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैंकहरुमार्फत नै गरेको खुलासा भएको छ । वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (आईसीआईजे) ले यो विवरण बाहिर ल्याएको हो ।
यसमा फरक प्रष्टै देख्न सकिन्छ। सिआइजेले शंकास्पद धन ओसारपसारमा ‘नेपालका केही बैँक र कम्पनीहरु संलग्न रहेको खुलासा’ भनेको छ भने कान्तिपुरले भने यही रिपोर्ट साभार गर्दा ‘केही नेपाली कम्पनीहरु संलग्न रहेको र तिनले त्यस्तो कारोबार स्थापित बैँकहरुमार्फत् नै गरेको खुलासा’ भनेको छ।
सिआइजेले बैँकहरु पनि संलग्न रहेको लेखेको छ भने कान्तिपुरले नेपाली कम्पनी संलग्न रहेको र त्यस्तो कारोबार चाहिँ स्थापित बैँकहरुमार्फत गरेको भनेर बैँकलाई जोगाउन खोजेको छ।
दोस्रो अनुच्छेद : बजफिडको नाम गायब
यो हो सिआइजेको रिपोर्टमा दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद
‘फिनसेन फाइल्स’ सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका कारोबारको खुलासा हो । यो अवधिमा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको शंकास्पद आर्थिक गतिविधि बारे निगरानी गरी ‘फिनसेन’ लाई जानकारी दिएका थिए । ती जानकारीहरू प्राप्त गरी ‘बजफिडन्यूज’ र आईसीआईजेले विश्वभरिका आफ्नो नेटवर्कमा रहेका पत्रकारहरूसँगको सहकार्यमा गरेको खोजलाई ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिइएको हो।
यो हो कान्तिपुरको रिपोर्टको दोस्रो अनुच्छेद
सिआइजेको रिपोर्टबाट कान्तिपुरले दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको बजफिडन्युजलाई हटाइदिएको छ। जबकि यो गोप्य डकुमेन्ट सबैभन्दा पहिला हात पार्ने बजफिड नै थियो। सिआइजेको रिपोर्टमा ९ वटा बैँक, १० वटा कम्पनी लेखिएकोमा कान्तिपुरले १० वटा कम्पनी र नौ वटा बैँक लेखेको छ।
चौथो अनुच्छेद : बैँकको नामै गायब !
अझ रमाइलो त कान्तिपुरको तेस्रो अनुच्छेदमा छ। सिआइजेको रिपोर्टको चौथो अनुच्छेदमा रहेको बैँकहरुको नाम सर्लक्कै काटेर फालेको छ कान्तिपुरले। सिआइजेको रिपोर्टमा भएको त्यो अनुच्छेद जुन कान्तिपुरमा छैन-
अर्को अनुच्छेद : केही कम्पनीको नामै गायब !
यसपछिको अनुच्छेदमा कान्तिपुरले केही कम्पनीको नाम गायब गरेको छ। सिआइजेको रिपोर्टमा यस्तो थियो-
कान्तिपुरको रिपोर्टमा यस्तो छ-
कान्तिपुरले यसमा मूल रिपोर्टमा रहेका ‘एलडी इन्टरनेशनल प्रालि, फेल्ट एण्ड यार्न प्रालि, ओमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एक्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेज’ को नाम गायब पारेको छ।
cij money laundaring graphics latest
अर्को अनुच्छेद : फेरि बैँक गायब
सिआइजेको रिपोर्टमा यस्तो छ-
तपाईँले याद गर्नुभयो होला सिआइजेको मूल रिपोर्टमा भएको बैँक शब्द कान्तिपुरमा फेरि पनि गायब भएको छ।
यसबाहेक कान्तिपुरको रिपोर्टमा ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड’ मार्फत अत्यधिक प्रवाह, सुन कम्पनीलाई प्राइम र बैंक अफ काठमाण्डूको सहयोग, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र जेटीईको सम्बन्ध, ‘सेतीदेवी’ लाई एभरेष्टको सहयोग, मेगामार्फत सेसल्स ४० लाख, बिओके र हिमालयन बैंक पनि, बैंक अफ काठमाण्डूको अर्को सहयोग, जिन्दललाई बाङ्लादेश बैंकको सहयोग जस्ता बैँक जोडिएका अंशहरु पनि पूरै हटाइएको छ। सिआइजेको पूरा रिपोर्ट यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ।
सिआइजेको रिपोर्ट कुनै पनि मिडियाले जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न। त्यसमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हरेक मिडियाको हुन्छ। तर रिपोर्टको एउटा मूल विषय रहेको बैँककै विषय हटाउनुमा भने नियत नै देखिन्छ। कि कसो?
फेरि कान्तिपुरले जोगाउन खोज्दैमा यो जोगिने विषय पनि होइन होला। किनभने सिआइजेको आफ्नै वेबसाइट, अनलाइनखबर, शिलापत्र आदि अनलाइनहरुले त बैँकको नामसहितै समाचार हालेका छन्।
DIRTY MONEY POURS INTO THE WORLD’S MOST POWERFUL BANKS
How Terrorists Use Big Banks To Move Money (Podcast)
Download FinCEN Files transaction data
फिनसेन फाइल्ससम्बन्धी सबै जानकारी